Typicaldị ejiji ndị Italytali na-enye mmụọ mara mma | Akụkọ Njem
na Ejiji ejiji nke mba ọ bụla A na-ahọrọ ha dabere na ọdịnala, akụkọ ihe mere eme na oge nke ịma mma nke ebe ọ bụla. Uwe ndị a bụ akụkụ ọdịbendị nke mba ọ bụla na agbanyeghị na ejighị ha taa, ha ka bụ akara maka ndị niile bi na mba ahụ. Ihe nnọchianya ha na-ewepụta n'oge pụrụ iche dịka ezumike dị mkpa.
Italy bu obodo mara nma ma buru oke ibu, ya mere enwere ike inwe nkowa di iche iche banyere ihe ahụkarị ekike nke Italy. Omenala na ejiji na-agbanwe site na ugwu gaa na ndịda yabụ anyị ga-anwa ịkọwa ntakịrị ụdị ejiji ndị a yiri ka ọ bụ nke Italytali.
1 Iji ejiji mara mma
2 Typicaldị ejiji nke .tali
3 Renaissance na .tali
4 Oge gara aga nke Rome
5 Uwe ndị Sardinia
6 Carnivals nke Venice
Iji ejiji mara mma
Uwe ndị a na-ahụkarị bụ ihe ncheta sitere n'oge ochie nke mba dị iche iche mara mma. Uwe ndị a nwere ike nwere ụdị mmetụta dị iche iche na n'ezie Italian suut na-ụfọdụ myirịta na ndị Germany. Ndị a bụ uwe ndị na-esikarị n'ike mmụọ nsọ ma ọ bụ n'oge mgbe enweghị mmetụta zuru ụwa ọnụ na ejiji, yabụ ihe niile bụ eziokwu. Maka iji ejiji ndị a, a na-ebute ha n'oge ememme nke ọdịmma mpaghara ma ọ bụ nke mba. Oge nke mpaghara ọ bụla nwere emume nke na-echeta ọdịbendị na omenala ya, yabụ ejiji dị oke mkpa dị ka otu akụkụ nke ememme ahụ.
Typicaldị ejiji nke .tali
Uwe a nwere ike iwere dị ka nke kachasị nke oftali mejupụtara a uwe mwụda na petticoat na onu ogbom. Ọ bụ uwe eji eme ya nke nwere akwa na uwe elu ya na elu ya. Tụkwasị na nke ahụ, isi mkpuchi ma ọ bụ mkpuchi isi bụ ihe a na-ahụkarị n'ememe Italiantali, anyị agaghị echefu mkpa Katọlik dị na mba a. Taa ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ejiji dị ka ndị a, sitere n'ike mmụọ nsọ site n'oge ochie, ọ bụ ezie na n'ihe gbasara ụdị ejiji, e nwere mpaghara ndị gosipụtara uwe dị iche na nke pụrụ iche.
Renaissance na .tali
Otu n'ime oge kachasị asọpụrụ na Istali bụ Renaissance, mgbe e nwere oge nke ịma mma. Tụkwasị na nke ahụ, uwe na uwe ndị dị n'oge a nwere àgwà nke mara ezigbo mma na nke ọma. Uwe ndị sitere n'ike mmụọ nsọ n'oge a na-adịkarị ọnụ, n'ihi na anyị na-ekwu maka lace na brocades iji mee uwe nwere akwa na ọtụtụ nkọwa. A na-ejikarị ejiji ndị a eme ihe n'ememe ndị a raara nye Middle Ages na ịdabere n'oge gara aga. A na-ejikwa ha maka ememme Carnival, ọkachasị na Venice.
Oge gara aga nke Rome
Onye ọ bụla maara oge Rom na ọmarịcha ya suut ejiri akwa ocha. Ha bụ ejiji nke taa bụ akụkụ nke ọdịbendị a ma ama na onye ọ bụla ejirila dị ka uwe ndị Rom, mana anyị agaghị echefu na ha bụkwa akụkụ nke ọdịbendị na akụkọ ntolite nke Italytali. Ya mere enwere ike iwere ha dị ka uwe ndị ọzọ na-ahụkarị nke sitere n'aka ndị Rom.
Uwe ndị Sardinia
N'agwaetiti Sardinia ha nwere ọdịiche ọdịbendị pụrụ iche na ejiji anyị nwere ike ịhụ otu n'ime ha. A na-eji akwa dị ogologo na sara mbara mee akwa ndị a nke nwere ọtụtụ akwa. A na-eji okpu na akwa mkpuchi na isi nwere akwa na akwa, yana ọtụtụ akwa. Ọ bụ na mbụ ịhụ ọla edo kpara nke ọma na ndo dị ka uhie ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Maka ha, uwe elu na-acha ọcha na-acha ọcha na-eyi uwe a na-eyikarị.
Carnivals nke Venice
Karịsịa mkpa na usoro nke ahụkarị ekike bụ Venice Carnivals, nke bu ndi ama ama n ’uwa nile. N'okwu a, ejiji sitere na uwe ndị Renaissance mara mma ebe ha na-anaghị ada ada mgbe a bịara n'igosi akwa dị oke ọnụ na nkọwapụta. Brocades, silk na satin bụ akụkụ nke uwe ndị a mara mma. Uwe elu nwere ọtụtụ olu na petticoats. Na elu bodices na-agbanwe iji gosi n'úkwù. Enwere ike iji ụdị nkọwa niile chọọ mma, site na lace na feathers nwere agba. Mgbe ọ na-abịa ejị, ọ dịghị ọchịchị nke uwe na-nditịm soro, naanị Renaissance n'ike mmụọ nsọ nke juru ihe niile. Na elu ọ ga-ekwe omume ịhụ mkpuchi ma ọ bụ okpu sara mbara. Mana ọ bụrụ na e nwere ihe kwesịrị iso uwe ndị a, ọ bụ ndị masks na-eme egwuregwu Venetian, bụ ndị amala ama n'ụwa niile. Ihe nkpuchi a na-adaba na uwe ahụ na agba ma na-achọkarị ya na brilliants, agba agba na nkọwa ndị ọzọ na-agbakwunye ọbụna okomoko karịa na uwe niile. Tinyere uwe ndị a ị nwekwara ike ịhụ ụfọdụ ngwa, dị ka Fans jupụtara chaplet na feathers ma ọ bụ uwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Dị ejiji ndị Italytali
Ihe ị ga-ahụ na Los Angeles